ỤLỌ ỌRỤ BRITAIN BỤ INTERACTION WALES MARA ỌKWA NA NTỌHAPỤ ỤJỌ NKE MAID NKE SKER NA 2019 - AKỤKỌ - 2019
Egwuregwu ahụ na-ewe iri kilomita site na ụlọ ọrụ mmepe nke mmekọrịta Wales.
Aha egwu ahụ na-ezo aka na nrọ Welsh nke aha ahụ na akwụkwọ Richard Blackmore bụ The Girl from the Scher, nke e bipụtara na 1872. Otú ọ dị, site na ọrụ ndị a, ejikọta egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na aha ebe ọrụ - Sker House (Sker House), nke dị na ndịda nke Wales.
N'ime egwuregwu ahụ, ụlọ ọrụ a na-eme ihe akụkọ ghọrọ ụlọ nkwari akụ ebe onye isi ihe nkiri, bụ Thomas Evans, ga-aga ịzọpụta onye ọ hụrụ n'anya. Omume onye na-ere ahịa na-ewere ọnọdụ na 1898.
Maid nke Sker bụ egwu onye mbụ na-egbu ndụ. Enweghị ngwá agha na ya, ya mere, ọ dịghị agha ọ bụla: ihe mmegide a na-emesi ike na Wales na-eme na atụmatụ (ndị mmepe na-ekwe nkwa ọtụtụ njedebe) na ịchọ ụzọ ndị ọzọ iji chebe onwe ha pụọ ​​n'aka ndị iro.
Emere egwuregwu ahụ maka nkeji atọ nke 2019. Maid nke Sker ga - apụta na PC, PlayStation 4, Xbox One na Nintendo Switch.